​बच्चा जन्माउन अब श्रीमान् नभए पनि हुने, कानुनमै आउँदैछ नेपाली महिलालाई यस्तो अधिकार
Sunday, 1 Jul, 2018 1:39 PM
१७ असार, काठमाडौं । नेपालमा कुमारी आमा बनेका घटना बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । तर, विवाह नगरी बच्चा जन्माउने कानुनी अधिकार अहिलेसम्म नेपालमा छैन । अर्थात् कुनै महिलाले जन्माएको सन्तानको बाबु पहिचान हुनुपर्छ । कुनै पुरुषसँग खास त विवाह गरेपछि मात्रै नेपाली महिलाले कानुनी रुपमा बच्च जन्माउन पाउने नियम छ ।
तर, अब भने विल्कुल फरक हुँदैछ । बिवाह नगरे पनि महिलाले चाहे बच्चा जन्माउन पाउने र कानुनी मान्यता दिने कानुन बन्दै छ । सरकारले महिलाको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै श्रीमान् बिना पनि बच्चा जन्माउने कानुनी छुट दिन लागेको हो । यो कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारसमेत भइसकेको छ ।
अहिले मस्यौदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुन मन्त्रालयले राय सुझाव दिने छ । मस्यौदा समितिका संयोजक डा. नरेशप्रताप केसीका अनुसार महिलालाई अधिकार दिने उदेश्यले उक्त ऐन बन्न लागेको बताए । श्रीमान बिना बच्चा जन्माउन पाउने महिलाको अधिकार हाम्रो परम्परागत सोचाईका कारण हनन भएकाले कानुनमै उल्लेख गरेर अधिकार दिन लागिएको उनले बताए ।
होला त कार्यान्वयन ?
कतिपय अधिकारकर्मीहरु महिलालाई कानुनी रुपमै यस्तो अधिकार दिंदा समाजमा छाडापन बढ्ने तर्क गर्छन् । तर, मस्यौदा समितिका संयोजक डा. केसी यसलाई स्विकार्दैनन् । ‘यस्तो कानुनले महिलालाई छाडा बनाउन खोजेको होइन, केही महिलाले आफ्नो श्रीमान् नभएपनि बच्चा जन्माउन चाहेका छन् । कतिपयले टेस्ट्युव बेबी जन्माउने लक्ष्य राखेका छन् । यस्ता महिलाको समस्या बुझेर कानुन बनाउन खोजेका हौं,’ केसीले भने ।
बच्चाको पहिचानका लागि बाबु नै चाहिँदैन
यसअघि कुनै बच्चाको पहिचान उसको बाबुको आधारमा मात्रै खुलाइन्थ्यो । बाबु विना पहिचान नपाएका धेरै अझै पनि छन् । तर, प्रजनन् अधिकार सम्बन्धी मस्यौदाले यो परम्परालाई तोडिदिएको छ । तर, बच्चाले आफ्नो बाबु खोजेको अवस्थामा के हुने भन्ने मस्यौदामा छैन । अधिकारकर्मीहरुले बच्चाले आफ्नो बाबु खोजेको अवस्थामा देखाउनु पर्ने तर्क गरेका छन् । आमाको प्रजनन् अधिकार हुन्छ भने आफ्नो बाबुका बारेमा जानकारी लिने मौलिक अधिकार सन्तानको पनि हुने उनीहरुको भनाई छ ।